I-PVC eguqukayo yabakhiqizi be-Injecttion - China I-PVC Flexible ye-Injecttion Factory & Abahlinzeki
I-PVC eguqukayo yokujova
I-PVC eguqukayo ye-Extrusion
Ngesandla Esiqinile PVC ngoba Inaliti
I-PVC eqinile ye-Extrusion
I-PVC Ca-Zn Izinzile
I-PVC One Pack Stabilizer
Thola Umkhiqizo Lapha
Ama-Super Light Injection Grade Granules we-Sandal Slipper
I-INPVC inikela ngamakhompiyutha e-100% e-Virgin PVC asetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-Kiddy Children Jelly Shoes. Izicathulo zethu zihlanganiswa nokumelana okuphezulu kwemishini, ukusebenza kahle ekucutshungulweni, emisha kanye nokubukeka okuphakeme. Siphakela ukwakheka okwenziwe ngendlela oyifisayo futhi okukhethekile ngokwemfuneko ngayinye ngesiqinisekiso sekhwalithi nezinsizakalo. I-Polyvinyl Chloride Compound inikeza iSlipper & Sandals yakho ukuguquguquka okuphezulu kanye nobuso obushelelezi.Izinketho zombala ezahlukahlukene ziqinisekisa izicathulo zokubamba ...
Eco-friendly New PVC Plastic For Kids Izingane Boots Injection
I-INPVC inikela ngamakhompiyutha e-100% e-Virgin PVC asetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-Kiddy Children Jelly Shoes. Izicathulo zethu zihlanganiswa nokumelana okuphezulu kwemishini, ukusebenza kahle ekucutshungulweni, emisha kanye nokubukeka okuphakeme. Siphakela ukwakheka okwenziwe ngendlela oyifisayo futhi okukhethekile ngokwemfuneko ngayinye ngesiqinisekiso sekhwalithi nezinsizakalo. Ukonga, i-polyvinyl chloride (i-PVC, noma i-vinyl) eyonga kakhulu yaziwa kakhulu ngokuthi izinto zepulasitiki ezenza amabhuzu emvula acace, agqamile, akhanyayo. Izithako zethu ...
Ama-granules we-PVC Asobala we-Kiddy Children Jelly Shoes Sandals
I-INPVC inikela ngamakhompiyutha e-100% e-Virgin PVC asetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-Kiddy Children Jelly Shoes. Izicathulo zethu zihlanganiswa nokumelana okuphezulu kwemishini, ukusebenza kahle ekucutshungulweni, emisha kanye nokubukeka okuphakeme. Siphakela ukwakheka okwenziwe ngendlela oyifisayo futhi okukhethekile ngokwemfuneko ngayinye ngesiqinisekiso sekhwalithi nezinsizakalo. Izicathulo ze-jelly, ezaziwa kakhulu ngokuthi amajeli, zenziwa ngokuphelele nge-PVC futhi ziyabonakala ngokusobala nge-jelly sheen ebukeka. Zenziwe ngokuphelele nge-PVC, lezi zimbadada ze-jelly zine-de ...
I-Flexible Polyvinyl Chloride Material Ye-PVC Boots Injection
Amabhuzu e-PVC aziwa nangokuthi amabhuzu emvula noma ama-gumboots, amabhuzu angenawo amanzi enziwe nge-PVC Compound. Amabhuzu e-PVC ngokuvamile angaphansi kwamadolo futhi ngokwesiko agqokwa ezindaweni ezinodaka noma ezimanzi. Amabhuzu e-PVC awagcini nje ngokuvikela izinyawo ukuthi zingabi manzi, futhi zivame ukugqokwa emisebenzini eminingi kubandakanya imfashini, ukudoba, ukulima, ukwakhiwa, njll. IPolyvinyl chloride, evame ukufushaniswa nge-PVC, iyi-polymer ye-thermoplastic. inombala ogqamile, omelana nokugqwala futhi ...
Amakhemikhali e-PVC Wokukhiqizwa Kwezicathulo Zobumbano Oluhlanganisiwe Namagwebu
I-PVC, i-Polyvinyl Chloride iyi-polymer ye-thermoplastic esetshenziswa kakhulu emjoqweni wezicathulo. Ama-PVC Soles enziwa ikakhulukazi ngenqubo yokujova ngqo kepha angenziwa futhi njengamabhodi e-foam ama-foam ama-micro-cellular amakhalenda futhi asikiwe. Inokumelana okuhle nokuguquguquka komhubi ngezindleko ezikhangayo. Amathe e-PVC nawo anezinto ezinhle zokuhlukanisa nokuvikela. Zibiza kahle futhi zinokunye kwesikhumba. Ngokutadisha nokukhiqiza okwenziwayo kwimboni yezinto ze-PVC ze-mor ...
Ama-granules e-PVC we-Injection ye-Slipper Uppers V-Straps
Singomunye wamaphayona embonini yokuhlanganiswa kwe-PVC eChina. Lezi zinhlanganisela zakhiwe ngokukhethekile futhi zenziwa ukufeza izidingo zesikhathi sanamuhla ngosizo lwemishini yesimanje kakhulu etholakalayo okwamanje. Siqinisekisa ukuhlangabezana namazinga wamazwe omhlaba futhi sigcina ikhwalithi yomkhiqizo endaweni ngayinye yokukhiqiza. I-PVC Strap Compound yethu yenziwa kusetshenziswa izinto ezi-eco-friendly ezingeni lokushisa elihle futhi isetshenziswa kakhulu ekhiqizweni kukodwa nokubopha ...
Amakhompiyutha e-Flexible PVC we-Pet Shoes Injection
I-INPVC inikela ngamakhompiyutha e-100% e-Virgin PVC asetshenziselwa ukukhiqizwa komjovo wezicathulo zezilwane. Izicathulo zethu ze-PVC zezicathulo zezicucu ezinokumelana okuphezulu kwemishini, ukusebenza kahle ekucubunguleni, emisha nasekubonakaleni okuphakeme. Siphakela ukwakheka okwenziwe ngendlela oyifisayo futhi okukhethekile ngokwemfuneko ngayinye ngesiqinisekiso sekhwalithi nezinsizakalo. Okwenziwe nge-100% i-virgin PVC PVC resin + izithasiselo ze-Eco-friendly Hardness ShoreA40-50 Ubuningi 1.18-1.22 / cm3 Icubungula Injection Molding ...
I-PVC Granules Compounds Injection Ibanga Lezicathulo
Isungulwe ngonyaka we-1993, iqembu le-INPVC lingomunye wabakhiqizi abahamba phambili be-PVC Compounds kanye ne-PVC Granules eChina.Senza izicathulo nezakhi zezicathulo ezihlanganisiwe ezisetshenziswa emishinini yokujovela izandla neqonde mpo kanye nemishini eyimishini ezenzakalelayo. Kwa-INPVC, sinikela ngezinhlobonhlobo zamapellets e-PVC angasetshenziswa ekwenzeni izicathulo ezisezingeni eliphakeme nezinyawo. Sinikeza i-PVC izicathulo zepulasitiki ezibonakalayo ngokwezifiso ezihlukile nokwakhiwa okukhethekile njengokwedatha ...
Umjovo, i-extrusion kanye ne-Blowing Molding
I-PVC ethambile ye-Extrusion
I-PVC ethambile yokujova